Ukucoca imibala eya kuthi ibe nayo i-Samsung Galaxy S10 | I-Androidsis
I-Galaxy S10 yenye yezona ndawo kulindeleke ukuba zithengiswe. Ngethamsanqa, isiphelo esiphakamileyo se-Samsung siza kuboniswa kungekudala, kuba inkampani yaseKorea inomnyhadala wentetho ilungiselelwe uFebruwari 20. Kuyo siya kuba nakho ukulwazi olu luhlu ngokupheleleyo, Ukongeza kwiflip yefowuni yokutyikitya. Umnyhadala ogcwele izinto ezinqabileyo, apho kukho umdla omkhulu kubathengi.
Kancinci kancinci sifumene ulwazi olutsha malunga nale Galaxy S10. Ngoku yonke imibala ihluziwe apho ezi modeli ziya kuthengiswa khona. Ukubheja i-Samsung kwiindidi zemibala kolu luhlu.
Kule mihla idlulileyo besele sineqela ukuvuza malunga noluhlu kunye neemodeli eziza kubakho kuyo. Njengoko Isamsung ayizukuveza iimodeli ezimbini kuphela njengesiqhelo. Kodwa bazinikele ekwandiseni uluhlu, ngeefowuni ezintsha njengeGPS S10e. Ke sinokulindela uninzi lweendaba. Kananjalo ngokwembala.
Okwangoku, eyokuqala imibala esiyifumanayo imnyama, isilivere ithoni phakathi kohlaza okwesibhakabhaka nokuhlaza kunye nokumthubi ekuthethwa kakhulu ngayo kwezi veki. Ke kujongeka ngathi sinokulindela ukuba ikhutshwe. Nangona amanye amajelo eendaba esitsho ukuba ayizizo zonke iinguqulelo zeGPS S10 ezinokuba nalo mbala utyheli.
Ukongeza kwezi, ukuvuza okungaphezulu kuyakuqinisekisa oko sinokulindela ithoni eblue. Kodwa le thoni inokwenzeka ukuba ize kamva. Njengoko kwenzekile nakwizizukulwana ezidlulileyo, kunokwenzeka ukuba emva kweenyanga ezimbalwa imibala emitsha enjengegolide okanye ipinki iyakwaziswa. Nangona oku akuqinisekiswanga kwimeko yeGPS S10.
Kodwa ukuba sithathela ingqalelo indlela i-Samsung ehlala isebenza ngayo, sinokuqiniseka ukuba imibala emininzi iya kubakho. Ke, okwangoku sinemibala emine kule Galaxy S10. Kwiiveki ezimbalwa olu khetho ngokuqinisekileyo luya kwandiswa neminye imibala eyongezelelweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Le yimibala ye-Samsung Galaxy S10 eya kuthi ithengiswe
Uyongeza njani okanye uyisusa njani indlela yokuhlawula kuGoogle Play
Ngoku ungadibanisa iiakhawunti zakho ze-Fortnite. Sikubonisa ukuba ungayenza njani